အမျိုးသား Archives - Page6of 211 - Focus Myanmar
1. မိမိဝင်ငွေ မည်မျှပင် နည်းပါးပါစေ 10ပုံ 2ပုံကို လှူပါ။ ရရှိလာသော ဝင်ငွေမှ ဖယ်ထား၍ မြတ်စွာဘုရားကို ဖယောင်းတိုင် တစ်ထုတ်ဖြစ်စေ. ပန်းတစ်စည်း ဖြစ်စေ လှူပါ။ မိဘများသက်ရှိထင်ရှားရှိလျင် မိဘများကိုလည်း လှူပါ။
2. ဘာသာရေးအတွက် အချိန်ပေးပါ။ မည်မျှပင် အလုပ်ရူပ်သည် ဖြစ်စေ. တစ်နေ့လျင် 1နာရီမျှလောက် ဘုရားရှိခိုး ပုတီးစိပ်ခြင်း ပြုလုပ်ပါ။
ခေါင်းဆေးကျွန်း သို့မဟုတ် မဏိဇောတကျွန်း ဘာကြောင့် မြစ်ရေမမြုပ်သလဲ
” မြတ်စွာဘုရားရှင် ဟင်္သာမင်းဘဝမှာ
ဟင်္သာကိုးသောင်း ခြံရံပြီး ဟိမဝန္တာတောကနေ
အရှေ့ဘက်ကို အစာရှာ ထွက်ကြတယ်မြေးရဲ့။
အဲ့ဒီတုန်းက မော်လမြိုင်တဝိုက် တောတွေတောင်တွေအကုန်လုံး ရေပြင်ကြီးပေါ့။
အချစ် ကံ ခေလွန်းသူ ကြာသာပတေး
ကြာသာပတေး သားသမီးတိုင်းမှာ မာန တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုစီ ရှိနေတက်ကြပါတယ်။ ဘယ်သူ့ သနားတာမှ မခံချင်ပဲ ကိုယ့်ဒူးကိုချွန် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး ဦးဆောင် တတ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်စိတ် ရှိတာကလဲ လေးစားစရာ ကောင်းလောက်တဲ့ ထူးခြားတဲ့ အချက်ပါပဲ။
ချစ်သူအပေါ် သူငယ်ချင်းအပေါ် အလွန် အချစ်ကြီးပြီး ခွင့်လွှတ် နားလည်ပေးတတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့အပေါ် ချစ်တယ်ဆိုတာ အမြဲ သံသယထားပြီး စိတ်စမ်းလေ့ ရှိတယ်၊ အချစ်ကို မယုံရဲတဲ့ သူမျိုးတွေပေါ့ (ချစ်မိ/ ခင်မိ သူတိုင်းက ပုံပြင် ပြောခဲ့တာကြောင့်လဲ ပါမှာပေါ့😛)
ကင်းမြီးကောက် ကင်းခြေများ အကိုက် ခံရပါက အမြန်အဆိပ်ဖြေနည်း
“ကမ္ဘာ့ဖလားကာလအတွင်း ချစ်သူရှိသောမိန်းကလေးများ ဆောင်ရန်၊ရှောင်ရန်အချက်များ”
(၂) ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကာလအတွင်း ဘီယာဆိုင်သွားလျှင် အပြစ်မပြောရပါ။(ဘီယာသောက်ချင်၍ မဟုတ် ဘောလုံးပွဲသွားကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။)
တောင်သာနယ် လက်ပံတောရွာက မိတ်ဆွေသုံးဦး ရဲ့ မူရင်း စာမူပိုင်ရှင်
“ပြောရဦးမယ်။ အမေက ဉာဏ်ကောင်းသတဲ့။ အလယ်တန်း၊ ရှစ်တန်းထိ နေခဲ့ရတာကိုး။ မြန်မာစာ စစ်ပြီးလို့၊ စာစီစာကုံး စစ်ပြီးရင် အမေက ဆရာ့ခုံပေါ်၊ စားပွဲပေါ် တက်ရတယ်။ အောက်က လက်ခုပ်တီးရတဲ့ခေတ်။ မြန်မာစာချိန်ရယ်၊ ပုံဆွဲရယ်၊ သင်္ချာရယ်၊ အဲဒီအချိန်ဆိုရင် အမေက စားပွဲပေါ်တက်တက် ရပ်နေရတာ”ဟု ငယ်စဉ်က အခြေအနေကို တမ်းတမ်းတတ ပြောပြနေသေးသည်။
အသက် ၁၂ နှစ်တွင် မူလတန်း အောင်မြင်ပြီး နိုင်ငံရေး အခြေအနေအရ ခုနစ်နှစ်ခန့် စာပေ မသင်ကြားရဘဲ အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ်တွင်မှ ပဉ္စမတန်းကို သင်ကြားရသည်။ အတန်းပညာ အဋ္ဌမတန်းထိ ဖြစ်သည်။ ၁၉၅၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်တွင် မလှိုင်မြို့နယ် ကူနီကျေးရွာတွင် မူလတန်းပြအဖြစ် စတင် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးနောက် နှောကန်ရွာသို့ အပြောင်းကျခဲ့ကာ အသက် ၂၅ နှစ်အရောက်တွင် ရုံးစည်ကြီး (ရုံးဇင်ကြီး) ရွာ စာတိုက်ခွဲမှူး ဦးအောင်နှင့် အိမ်ထောင်ကျပြီး သားကိုးဦး၊ သမီးတစ်ဦး မွေးဖွားခဲ့သည်။
ရေတွင်းပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်တူးပြီး လူ့အသက်ပေါင်း ၈ သိန်းကျော်ကို ကူညီနိုင်ခဲ့တဲ့ ၆ နှစ်သားလေး
ရိုင်ယန်ဟာ အိမ်ရောက်တာနဲ့ သူ့အဖေနဲ့ အမေကို ကူညီပေးဖို့ ပြောတယ်။ သူ့အဖေက ပြောတယ်။ ဘေးအိမ်တွေက အလုပ်တွေကို ကူလုပ်ပေးရင် ဒေါ်လာ ၇၀ ရနိုင်တယ်။ ဒါဆိုရင် ရေတွင်းတစ်တွင်း တူးပေးလို့ ရတယ်တဲ့။ ရိုင်ယန်ဟာ ၄ လလောက် အလုပ်လုပ်လို့ ဒေါ်လာ ၇၀ ရလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီပိုက်ဆံလေးနဲ့ အာဖရိက,က လူတွေကို မကူညီနိုင်ဘူးဆိုတာ သူသိလိုက်တယ်။ ဒီတော့ သူ ဘာလုပ်သလဲ။ နောက်ထပ် ကျပန်းအလုပ်တွေ လုပ်ပြီး ငွေစုတယ်။ ကျောင်းတွေနဲ့ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွေမှာဖရိက,က လူတွေအတွက် ရေရဖို့ ကူညီဖို့ ဟောပြောပြီး အလှူခံတယ်။